Maxay Ahayd Sababtii Uu Philippe Coutinho Farahiisa Dhegaha U Galiyay Markii Uu Goolka Ka Dhaliyay Man United? Laba Arimood Oo Miiska Saaran. - GOOL24.NET
Maxay Ahayd Sababtii Uu Philippe Coutinho Farahiisa Dhegaha U Galiyay Markii Uu Goolka Ka Dhaliyay Man United? Laba Arimood Oo Miiska Saaran.
April 17, 2019 Mahamoud Batalaale
Kubbad sameeyaha kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Brazil ee Philippe Coutinho ayaa xalay soo bandhigay mid ka mid ah qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa ee waayihiisa Barca isaga oo ka mid ahaa ciyaartoydii burburiyay rajadii Man United ee UEFA Champions League.
Philippe Coutinho ayaa gool cajiib ah ka dhaliyay kulankii Camp Nou isaga oo si rasmi ah u dilay rajo kasta oo ay Man United ka qabtay in ay soo laabto, laakiin markii uu Coutinho goolka dhaliyay waxa uu sameeyay dabaal deg qariib ah kaas oo su’aalo layska waydiiyay.
Philippe Coutinho ayaa farihiisa dhegaha galiyay iyada oo lagu micneeyay laba arimood oo kala duwan isla markaana ay mid kastaaba macquul tahay. Philippe Coutinho ayaa xili ciyaareedkan dhibaato wayn la soo kulmay waxaana hore ugu soo oriyay jamaahiirta kooxdiisa Barcelona laakiin xalay waxay u ahayd habeen bar-badal u noqon kara dhibaatadii uu ku soo jiray.
Dhegihii uu Philippe Coutinho faraha galiyay waxaa lagu micneeyay in uu ula jeeday jamaahiirta kooxdiisa Barcelona ee xili ciyaareedkan ku soo oriyay kulamadii aanu shaqada fiican qaban, wuxuuna ku muujiyay in aanu dhegaysanayn eedaynta ay u soo jeediyeen.
Markale waxaa lagu micneeyay in jamaahiirta Man United ay Philippe Coutinho colaad iyo orin ku soo dhaweeyeen kulankii Old Trafford maadaama oo ay ka urinayeen xifilankii uu Liverpool kula soo galay, waxaana lagu sifeeyay in uu dhego faro galinta ula jeeday jamaahiirta United.
Laakiin marka lays barbar dhigo labada arimood ee lagu qeexay in Philippe Coutinho uu ula jeeday dabaal degiisa, waxaa xoogan badan in uu jamaahiirta kooxdiisa dhegaha ka furaystay isla markaana uu u muujiyay in aanu eedaymahooga dhegaysan doonin balse uu dagaalka kooxdiisa sii wadan doono.
Qaar ka mid ah jamaahiirta kooxda Barcelona ayaa ka falceliyay goolkii Philippe Coutinho waxayna ku sifeeyeen in uu ahaa jawaab cad oo uu ka bixiyay eedayntii uu qaar ka mid ah taageerayaasha kooxdiisa kala soo kulmay iyaga oo rajeeyay in uu kani noqdo bilawga wax khaas ah oo ay Coutinho ka helaan.
Markii Philippe Coutinho badalka lagu saaray daqiiqadii 80 aad waxa uu soo dhawayn iyo sacab ka helay jamaahiirta kooxdiisa Camp Nou so buux dhaafiyay waxayna xidiga reer Brazil u ahayd habeen uu dareemay jacaylkii taageerayaasha Blaugrana.
Si kastaba ha ahaatee, Philippe Coutinho oo aan wali Barcelona ku soo bandhigin qaab ciyaareedkii wareerka ahaa ee uu Liverpool ka soo sameeyay ayaa kulankii Man United muujiyay in uu wali uu haysto fursad badan oo uu ugu sii dagaalami karo in uu Camp Nou ku sii nagaan karo.